Shanghai Beyond Case-SHBC team just finished their show at HongKong Mobile Electrical shows. Their high-end, unique design customized cases: such as headphone cases, VR cases, Earphone cases, Hard disk cases etc have attracted many global customers from US, German, France, Italy, Turkey, Japan et...ဆက်ဖတ်ရန် »
Shanghai Beyond Case asaleading manufacturer of high-end customized EVA carrying cases, EVA molded Case etc， will attend the years’ largest promotion activity held by Alibaba. So any batch order placed during this March could enjoy 2% OFF (UP TO USD200) + FREE INSPECTION Do you ha...ဆက်ဖတ်ရန် »
SHBC(Shanghai Beyond Case-Leading manufacturer of high end OEM/ODM EVA packaging cases, includes EVA headphone cases, EVA drone cases, EVA Nintendo Switch cases, EVA earphone Cases, EVA VR cases, EVA medical cases, EVA first aid cases etc ) will attend the Mobile Electronical Fair in April 2018. ...ဆက်ဖတ်ရန် »
SHBC CNY holiday arrangements as below: Factory starts from Feb 8th to Feb 28th Office starts from Feb 14th to Feb 23rd Beyond Case family wish all customers and partnersahappy new year, and thanks for your kind supports all this time. What is Chinese Spring Festival? Lets see below: 2018 Chi...ဆက်ဖတ်ရန် »
Shanghai Beyond Case will attend CES fair which is the world’s gathering place for all who thrive on the business of consumer technologies. Beyond team will bring their new launched hard shell EVA cases on the show: The carrying case for DJI drones, Switch storage cases, Pistol carrying cases, ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Beyond Case(Leading manufacture of high-end customized EVA carrying cases) will attend follwing trade shows, welcomealot your visit. The most innovative, top grade customized cases(EVA cases, zipper tool cases camera cases, drone cases, pistol cases etc) will be exhibited. Looking forward meet...ဆက်ဖတ်ရန် »
At Beyond Case, we design and produce HIGH-END custom cases that best suits your application. The Custom Molded Cases can be designed to fit every type of equipment. The highly engineered design offers security against impact, dust, sun, moisture and other environmental stresses. Interiors can be...ဆက်ဖတ်ရန် »
EVA is characterized by good flexibility, rubber-like flexibility, it still has good flexibility at -50 . The surface is gloss and it has good chemical stability, anti-aging and ozone resistance. It is safer than other material and non-toxic. The largest feature of EVA case is that it can provide...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-27-2017
စိတ်ကူးတစ်ခုဘဝဆောင်ခဲ့နည်းနည်းလွှမ်းမိုးသောဖြစ်, ကြှနျုပျတို့အတွက်လာဘယ်မှာ Hacking ကိုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်စဉ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူစတင်သည်။ ပေါင်းစပ်အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်ကျော်အတူကျွန်တော်တစ်ဦးအဖြစ်မှန်သို့မဆိုစိတ်ကူးကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကတိကျတဲ့အဘို့မဆိုလျှောက်လွှာလိုအပ်မလိုအပ်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးအပြည့်အဝထုံးစံအမှုဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
သင်တစ်ဦးပုံသွင်းနဲ့ Eva ဖြစ်ရပ်မှန်သုံးစွဲဖို့ get အဘယ်အရာကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ?
သငျသညျနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပျကွောငျးအထိခိုက်မခံတူရိယာရှိပါကတစ် thermoformed နဲ့ Eva ကိစ္စတွင်တစ်ခုစံပြဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကြောင့်ကြောင့်ဖွင့်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ကျောမှုရန်, နဲ့ Eva ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်အကာအကွယ်ဂုဏ်သတ္တိများရဲ့စွန့်ခြင်းမရှိဘဲ, ခက်ခဲပလပ်စတစ်ဖြစ်ပွားမှုမှပြီးပြည့်စုံအစားထိုးပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်အလွှာပြုလုပ်ခြင်း ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအနေဖြင့်တစ်ဦးကို 100% စိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများထုံးစံအမှုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုမှအဓိကပံ့ပိုးဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချွတ်ယွင်း-အခမဲ့အမိန့်တင်ပို့ဖို့အပြည့်အဝတာဝန်ယူဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့တဦးတည်း defe ကိုရှာဖွေလျှင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဖြစ်ရပ်မှန်ကျော်လွန်စိတ်ကြိုက်နဲ့ Eva ဖြစ်ရပ်မှန်များအတွက်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်
သငျသညျနဲ့ Eva (Ethylene ဗီနိုင်း acetate) ထုတ်ကုန်ရှာတွေ့မယ့်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိခြင်းခဲ့တာမှန်လျှင်, သင်၏အသက်တာရုံပိုမိုလွယ်ကူတယ်။ အပြင်ဖြစ်ရပ်မှန်မှာ, သင်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပွားမှုထုတ်ကုန်များအားလုံးအတွင်းအပြင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံ OEM အမှုပေါင်းအများအပြား၌ဤထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ , လတ်ဆတ်သောပြောင်မြောက် & ယင်း၏ပျော့ပြောင်းပြီး texture, Great အတူစတိုင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »